Ministry to develop 3,000 housing units for retired civil servants | Myanmar Business Today
HomeBusinessMinistry to develop 3,000 housing units for retired civil servants
The Ministry of Construction said that it will develop 3,000 units on 69.5 acres of land in Nyana Theikdi Quarter, Zambuthiri Township, Naypyidaw, for retired civil servants.
The housing project with 3,000 units each having two bedrooms, living room, bathroom, and restroom is planned to complete inayear.
The retired civil servants who are interested to buy the apartment will have to pay 20 percent of the value of the apartment as down payment and the rest under installment payment.
The Department of Urban and Housing Development under the Ministry of Construction design the project and will hireathird-party company for QA/QC inspection.
The government in June 2017 issuedadecree to develop rental housing for government employees and subsequently formedacentral committee and working committee for the projects, most of which are located in Naypyidaw, Yangon, and Mandalay.
အငြိမ်းစား ၀န်ထမ်းများအတွက် နေပြည်တော်တွင် အိမ်ခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ တည်ဆောက်မည်
နိုင်ငံ၀န်ထမ်းများ အငြိမ်းစားယူသည့်အခါတွင် ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်ရန်အတွက် နေပြည်တော်တွင် ပထမအဆင့် စီမံကိန်းအနေဖြင့် အိမ်ခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ကို တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံကိန်းကို နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရီမြို့နယ်၊ ဉာဏသိဒ္ဓိရပ်ကွက်ရှိ မြေဧက ၆၉.၅ဧက ပေါ်တွင် တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး တည်ဆောက်ရေးကာလမှာ စီမံကိန်း စတင်ချိန်မှ ၁နှစ်အတွင်း အပြီးဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ခန်းပေါင်း ၃၀၀၀ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကာ အိမ်ခန်းတစ်ခန်းလျှင် စတုရန်းပေ ၆၅၀ ကျယ်၀န်းသည့် အိပ်ခန်း၂ခန်း၊ ဧည့်ခန်း၊ မီးဖိုခန်း၊ ရေချိုးခန်းနှင့် သန့်စင်ခန်းများ ပါ၀င်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ၀ယ်ယူလိုသည့် အငြိမ်းစား၀န်ထမ်းများအနေဖြင့် အိမ်တန်ဖိုး၏ ၂၀%ကို ကနဉီး ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး ပေးသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ၈၀%ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ပေးသွင်းသည့် စနစ်ဖြင့် ရောင်းချရန် လျာထားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ယင်းစီမံကိန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် အဆောက်အဦးဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်းကို ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ မြို့ရွာနှင့်
အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဉီးစီးဌာနမှ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပြီး အဆောက်အဦး အရည်သွေး ပြည့်မီစေရန်အတွက် QA/QC ကို ပြင်ပ အဖွဲ့များ ငှားရမ်းကာ စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleMyanmar to borrow $20 mln from Korea to build Dala Bridge
Next articleQR Code System for Interbank payment likely to launch this year